MAQAAMKA CAASIMADA SOOMAALIYEED WAXAA WADAAG KU AH 15ML SHAN IYO TOBAN MALYAN OO LEH,DAWLADA AYAANA MASUULKA AH AMAANADAA – idalenews.com
MAQAAMKA CAASIMADA SOOMAALIYEED WAXAA WADAAG KU AH 15ML SHAN IYO TOBAN MALYAN OO LEH,DAWLADA AYAANA MASUULKA AH AMAANADAA
Waxaa dalkeena uu dawlad la aan ahaa nus qarini,hadaba maqnaanshahaas dawladnimo waxay keentay in ay lunto karaamadii qofka soomaaliga ah dal iyo dibadba. Waxaa baylah noqday xuduudaha dalkeena haday ahaan lahayd cir iyo dhul iyo badba. Waana uugu wacan sharci iyo nidaam dawlad nimo oo aan ka jirin.
Waxaa dhacday oo ku cad taariikhda dalkeena goob joogna aynu ka nahay maanta, in laba qolo si ba an uuga faa iidaysteen fursadaa banaan ee ay ka heleen dayaca dalkeena ha dheeyay. wax yar baynu ka oranaynaa waxay yihiin labada qolo ama kooxood.
1.Dawlado shisheeye,iyo maafiyada caalamiga ah
2.Dad soomaaliyeed oo aan lahayn damiir,oo dhaafsanaya lacag yar dalkooda,diintooda,soomaalinimadooda.kuwaas oo ah Dawlad Diid iyo Xaaran Quutayaal.
Labadan cadaw oo iskaashanaya ayaa dhashay burburkii dawladii soomaaliyeed ee dhexe kadib sanadkii 1991 dii. labadan cadaw waxay ka dhashaan dalkastoo burbura oo dawlad la aani ku dhacdo,waxaana dal walba ka difaaca shacabkiisa wadaniga ah,oo samaysta garabna istaaga dawladnimada si markaa dalkaasi u helo nidaam iyo kala danbayn cadawgana loo sugo.
1.Dawladaha shisheeye iyo maafiyada caalamiga ahi, waxay inoo baabi`iyeen dhan dhaqaale,dhan siyaaso,dhan nabad galyo intaba.anoo koobaya dhanka siyaasada waxaad wada ogsoon tihiin,markaynu dawladeenii gacmaheena ku duminay,ee aynu dhexdeena isku mashquulay oo dagaalo sokeeye galay, intaynu isku jeednay in layna dhex galay oo laynoo sameeyay dagaal oogayaal lasiiyo hub iyo lacag,mid walbana loo diiday in uu walaalkii la heshiiyo! shacabkuna maadaama dagaalo sokeeye socdeen waxaa laga dhigay dagaal ooguhu in uu beesha difaacayo oo beeshaa kale ka difaacayo.laakiin dhab ahaan dawlado iyo shirkado maafiya ah ayaa ku shaqaysanaayay.
Qaramada midoobay waxay sheegeen in hubka galaya soomaaliya cuna qabatayn la saaray,hadana hub cusub ayaa dagaal oogayaasha joogto u heli jireen! goboladii dalka iyo caasimadii umada soomaaliyeed waa lakala qaybiyay ilaa la arkay mogdisho oo xaafadaheedii mid walbaa uu haysto dagaal ooge si looga ilaaliyo in soomaalidu isu timaado oo tashadaan mogdishana nabad noqoto.
Dadka soomaaliyeed siyaaso shisheeye ayaa lagu kala qoqobay. dhanka dhaqaalaha dalkeena khayraadkiisii barigana macdan badan ayaa laga gurtay,badana maraakiib ayaa la keensaday oo lagu gurtaa khayraadkeena oo layna dhacaa. waxaa lagu shubay badeena qashinka wasakhda warshadaha ka soo harta ee halista ah,qashin qub ayaa laga dhigtay dalkeena. waynu aragnay cudurada ka dhashay suntii lagu shubay dalkeena.
Dawladaha shisheeye iyo maafiyada caalamiga ahiba waxay hortaagan yihiin in soomaaliya hesho dawlad shaqaysa,oo dalkeenu noqdo mid leh awood uu ku ilaa shado xuduudihiisa bad iyo bari iyo cirba,sidii shalay markaynu ahayn dawlad aynu u ilaashan jirayba.Soomaaliya isuma sheegayno dawladaha cadawga inoo ah waa wada garanaynaa. waxay inagu dhex beerteen dad u shaqeeya oo daba dhilf ah.
2.Kooxdan labaad oo ah Dawlad Diid ahna Xaaraan Quutayaal iyagu waxay ku shaqeeyaan rabitaanka cadawga soomaaliyeed ileen dawlad walba iyo dalwalba waxa uu leeyahay cadaw shisheeye ah.qoladani waxay ku naaxeen dilka iyo dhaca umada soomaaliyeed,waxay haystaan hantidii dawlada sida jardiinooyinkii,wadooyinkii,iskoolaadkii,jaamacaadkii,isbitaaladii,dhismo yaal kala duwan ee dawlada. dhanka kale waxay haystaan beerihii shacabka,guryihii shacabka ee khusuusiga ahaa.
Waxay dalka ku beeraan xashiishka,waxay dalka keenaan daawo been abuur ah,waxay hortaagan yihiin in dalkeena ay ka dhalato dawlad iy sharci kaasoo siinaya qof walba xaqiisa maxkamad horteeda. waxay difaac ugu jiraan in dalku sidaa ahaado,fawdo iyo dawlad la aan, waxay la shaqaystaan maafiyada caalamiga ah waxaana hogaamiya sirdoon dawladaha cadawga inoo ah. waxay dadka ku kiciyaan qaab qabiil,waxay adeegsadaan lacag,waxayna khatar joogta ah ku yihiin in dalkeena ay ka hana qaado dawladnimo.kuwaana kaxun shisheeyaha.
Markii la arkay in soomaaliya ay dooratay madaxwayne wadani ah,waxaa dawlado shisheeye oo adeegsanaya XAARAN QUUTAYAAL AMA DAWLAD DIID ay dhigeen shirqool u jeedkiisu ahaa,in wax loogu dhimo madaxwaynaha soomaaliya iyo shacabkiisa xiriirka iyo kalsoonida u dhaxaysa.dawlada soomaaliyeed iyo shacabkuba way iska garteen markiiba dabinkaa loo dhigay waana laga gudbay.waxaa xasuus mudan in qabashadii qalbi dhagax dawlada soomaaliyeed oo aan ogayn kana hadal dawlado shisheeye sheegeen in ninkaa lahayo lana soo dhiibo!!! halkaa waxaynu ku fahanay inta uu qodan yahay xiriirka dawladaha cadawga ahi la leeyihiin XAARAN QUUTAYAAL.
Waxay ku jiraan Dawlad Diidku baarlamaanka,dawlada dhexdeeda waxayna u adeegayaan shisheeye iyo in aan dalkaanu helin dawlad shaqaysa dib danbe. Soobixidii iyo doorashadii madaxwaynaha soomaaliyeed iyo raysal wasaaraha soomaaliyeed ee wadaniga ah dabinkii loo dhigay waxaa xigay maanta markii la arkay in Puntland iyo Galmudug iyo dawladii dhexe isla jaan qaadeen oo si kasii waynba xiligii la doortay farmaajo loo soo dhaweeyay madaxwaynaha qaranka soomaaliyeed,ayaa cadawgii faraxaas iyo guushaas soomaaliyeed ka muraara dilaacay oo is hayn waayay. waxayna bilaabeen shaqadoodii kicinta qabaa ilada iyo iska horkeenka shacabka iyo dawlada.
Guul bay inoo tahay in maanta Galmudug ay heshiisay oo mid qura tahay,oo u adeegaysa danta iyo nabad galyada iyo xasiloonida dalka soomaaliyeed.Waxaana madaxwayne ka ah Galmudug xaaf oo ah maanta oday soomaaliyeed oo dhisaya dalkiisa kana saaraya dawlad la aanta taariikhdaana qoraysa,cadawgeenu tanuu ka xun yahay.
Shirqoolka maanta soomaali loo dhigayo ayaa ah mid dawlado shisheeye ay laaluush ku bixiyeen iyagoo usoo mariyay XAARAN QUUTAYAAL ah DAWLAD DIID,waxayna isku dayayaan markay wax kale ka quusteen,oo shacabkii iyo dawladii kala dhex gali waayeen isku day kastana ku fashilmeen,mashruuc ah caasimada soomaaliyeed maqaamkeeda,waxay inaga dhigayaan hadaynu nahay soomaali dad aan casimadba hore usoo lahayn oo hada maqaam u raadinaya!? caasimadeenu xeer iyo maqaam waa leedahay waana lahaan jirtay dawladaana masuul inooga ah.
Caasimada soomaaliyeed ee MOGDISHO,waxay caasimad ku tahay codka umada soomaaliyeed oo dhan,waxaana iska leh umada soomaaliyeed oo dhan,oo isugu gaysay maskax iyo maal kaasoo aysan isugu gaynin gobolada intooda kale,waayo waa magaalo wadaag ah oo lawada leeyahay dawladuna gacanta ku hayso ilaalinta amaanadaas ka dhaxaysa soomaali.
Dad masaakiin ah iyo wax magarato ayaa in yar oo shisheeye u adeegaysaa oo fuliyayaal ah soo kicinayaan,iyagoo majara habaabinaya una sheegaya mogdisho waxaa iska leh beel kaliya,waxaana maskaxda looga xaday oo lagu jaha wareer shay masaakiintaas,Sadex malyan oo MOGDISHO kunool xaqoodii caasimada aa la rabaa.3 malyan caasimadoodii.12 malyan iyagu maqaamka caasimada iyo xuquuq malaha! mise waxaa laga hadlayaa caasimada dalka bangaalo dheesh?
Waxay ka hor imanayaan hanaan kii sharci iyo dawladnimo danbi bayna faraha kula jiraan iyo khiyaamo qaran. waxaynu wada ogsoonahay macnaha caasimad,waxaynu ogsoonahay in soomaaliya aan wali lahayn tiro koob sax ah intii mudo ah,hayeeshee lagu qiyaaso maanta 15000 000 shan iyo toban malyan dadkeeda,shan iyo tobankaas ayaa wada leh caasimada,suaashaa waxay tahay waakuma kan hadlayaa? ee intii badnayd oo ah 12000 000 laba iyo toban malyan oo dad ah duudsiyay la haanshahoodii caasimada MOGDISHO,dad yaroo 3000 000 ahna leh mogdishay leeyihiin oo xaqaa kamaqan? kala qaybinta umada soomaaliyeed hada uun lagu bilaabay waa maxay? Soomaalidaa tiraahda “baroortu orgiga ka wayn!!”
Waa idiin cadahay wax kale maha u jeedaduna maha caasimad iyo 3000 000 malyan wax u raadin tood midna ee waa labadii cadaw oo iskaa shanaya dabinkood,waa cadawgii dawlado shisheeye iyo maafiyo iyo cadawgii XAARAN QUUTAYAAL, waa ku dayid. hadafkooda oo dhamina ilmaha yar ee dugsiga dhexe dhigta ayaa garanaya wax kale maha waa uun DAWLAD DIID. waa caasimad iyo reeraa leh wax cagliga gali karaysa maha iyo wax caalamku ku shaqeeyo ilbaxa ahi midna. dawladnimaduna sidaa ma`aha. dhanka kale waa ognahay dadka banaadiriga ahi maba laha dhaqanka ah badawnimadaas mogdisho waxay ku soo jiidan jireen in cid walbaa soo dagto iska dhaaf soomaaliya oo iskaleh warkeed.Aduunkay kasbanayeen mana wadaan fikirkaan guracan waa ka wayn yihiin daciif nimadaan.fahan hadaba cida wada?
Dalkeena maha mid aynu si fudud iyo hawla aan aan dib uugu soo ceshan karo dawladnimadeenii iyo shaqaynta sharciga,waxaa qofkastoo soomaali ah saaran in uu cadawga iskaashaday ka ilaaliyo dalkeena,waana waajib in aan u dhimanaa difaaca dalkeena diinteena iyo soomaalinimadeena iyo dawladnimadeena.waxaa laga xun yahay israaceena shacab iyo dawlad. cidkasta oo ka hortimaada dawlada soomaaliyeed waa in cagta la mariyaa waana waajib diiniyan ah.cadawgu midabkastoo inoogu yimaado nagama fakankaro.Qofkastoo soomaaliyeed waxaa deeqa oo kaliya soomaalinimada iyo dawladnimada iyadaa naga wada dhaxaysa iyadaana nagu filan.dadka yar ee shaqsiyaadka ah ee fidnada kawada dalkeena shacabku ha soo sheegaan dawladuna sharciga ha ku fuliso.danbiga dadkoo dhan ma wada laha waa dad gaara oo is qarinaya inbadan.
Soomaaliya way dhaqaaqday mahadaasna illaahay baa leh iyo raga wadaniga ah ee inoo kacay ee taariikhda galay waa madaxwaynaheena FARMAAJO IYO RAYSAL WASAARAHEENA KHAYRE oo ah wadaniyo u tafaxaytay nabad kusoo dabaalida gayiga soomaaliyeed.nabad iyo nolol ayaa u bilaabatay shacabka soomaaliyeed mustaqbal bayna leeyihiin iyaga iyo caruurtooduba.
Qolankii Liiban Ali
DAAWO MD KGS SHARIIF XASAN DIB UGU SOOLAABTAY BAYDHABO KUNA SOO DHAWEYEY MADAXA KA SOCOTAY UK
Video WARAYSI GAAR AH SENATER XUSEEN SHIIKH OO KA TIRSAN AQALKA SARE